Fivondronamben'ny Federasiona Ranomasimbe Indiana - ss 4t l0812 lat
Ny toetry ny Fiangonana (2)
Alatsinainy 19 Nov.
Ankoatra ny fampiasana io teny hoe «ecclesia» io, dia sary maro hafa manazava ny toetry ny fiangonana sy ny asany no ampiasain’ny Testamenta Vaovao. Anio isika dia hijery foto-kevitra lehibe anankiroa mikasika ny fiangonana: ny fiangonana amin’ny maha-vahokan’Andriamanitra azy ary ny fiangonana amin’ny maha-tenan’i Kristy azy.
1. Foto-kevitra entin’ny Baiboly hilazana ny zanak’i Isiraely ny hoe “vahoakan’Andriamanitra” (Deo. 14:2). Vakio ny 1 Pet. 2:9 izay ampiharana mazava tsara io foto-kevitra io amin’ny Kristianina. Ahoana no tokony hahatakarantsika ny hevitr’io ho antsika amin’izao fotoana izao?
Mariho fa na dia ampiharina amin’ny Kristianina aza io foto-kevitra io, dia mbola ampiasaina ihany izany hilazana ny firenena isiraely (Lio. 1:68; Rôm. 11:1,2). Mazava loatra fa ampiharin’ny Testamenta Vaovao amin’ny fiangonana io foto-kevitra io mba hoentina hilazana fitohizana sy fahatanterahan-javatra. (Jereo ny Gal. 3:29.)
2. “Tenan’i Kristy” - Ny Rôm. 12:5; 1 Kôr. 12:27 ary ny Efes. 1:22,23 dia manoritra ny fiangonana ho tenan’i Kristy. Ahoana no anampian’ireo andininy ireo antsika hahatakatra bebe kokoa ny toetrany sy ny asany?
Foto-kevitra maromaro no mety ho hita ao anatin’ireo andininy ireo, ka ny firaisana tokony ho hita ao amin’ny fiangonana angamba no tena misongadina indrindra (jereo ny lesona Alarobia). Foto-kevitra miseho manerana ny Testamenta Vaovao io, indrindra indrindra ao amin’ny 1 Kôr. 12, izay ilazan’i Paoly hoe: “Fa tahaka ny tena iray ihany, anefa maro no momba ny tena, ary ireo rehetra momba ny tena ireo, na dia maro aza, dia tena iray ihany, dia tahaka izany koa Kristy. Fa Fanahy iray ihany no nanaovam-batisa antsika rehetra ho tena iray, na Jiosy na jentilisa, na andevo na tsy andevo; ary isika rehetra dia efa nampisotroina ny Fanahy iray. Nefa ny momba ny tena tsy iray fa maro. Raha ny tongotra hanao hoe: Satria tsy tanana aho, dia tsy mba momba ny tena, -- amin’izany dia tsy momba ny tena va izy? Ary raha ny sofina hanao hoe: Satria tsy maso aho, dia tsy mba momba ny tena — koa amin’izany dia tsy momba ny tena va izy? Raha maso avokoa ny tena rehetra, aiza àry izay fandrenesana? Raha fandrenesana avokoa, aiza àry izay fanimboloana?” - 1 Kôr. 12:12-17.
Misy olona sasany mararin’ny aretina izay fantatra fa avy amin’ny tsy fahatomombanana eo amin’ny fiarovan-tenan’ny vatany ka izy tenany ihany no asiany mafy satria heveriny fa otrik’aretina. Saintsaino ny mety ho azo anoharana io aretina io amin’izay mety hanjo ny fiangonana amin’ny maha-“tenan’i Kristy” azy.